Seenaa Haadha Keenya Qulqulleetti Dubree Maariyaam
Dn. Zalaalam Daggafaa fi
Ji’oota dura waa’ee haati keenya qulqulleetii dubroo Maariyaam Waaqayyoon filatamtee Waaqayyo Gooftaan keenya dhala namaa fayyisuuf jecha dubartoota keessaa akka ishee filate ilaallee turre. Amma ammo waa’ee dhaloota ishee ilaalla Waaqayyo laphee hubatu nuuf haa kennu.
Jalqaba irratti waa’ee maatii haadha keenya Maariyaam, akaakilee Ishee fi jireenyi afuuraa isaanii akkam akka ture muraasa ibsuu yaalla.
Waaqayyo fuulduratti kan jaalataman, amantaa fi hojii gaarii tiin cimanii (jabaatani) jiraachaa kan turan akaakileen hadha keenyaa Dubree Maariyaam Teektaa fi pheexriiqaa(Phaxriiqaa) jedhamu. Isaanis Sooreyyoota(sooressoota) hunda qaban turan. Baay’inni qabeenya isaaniis lakkoofsaa fi safara (daangaa) hinqabu ture.Garuu ijoollee(dhala) hin qabani ture.
Read more: Seenaa Haadha Keenya Qulqulleetti Dubree Maariyaam
Read more: Ibsa Qulqulluu Sinoodoosiin laatee
Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Afuura Qulqulluu Waaqa tokko amen
Eebila 12 Mazgabuu Kafyaalawuun
Eebila 11 bara 2007 Ibsa Qulqulluu Sinodoosiin Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaa Namoota Biyya Liibiyaatti ajjeefaman ilaalchisee kenne
Read more: Sinodos
Du'aa Ka'uu Kiristoosiif Isin Gahe!
Dhalli namaa waggoota 5500 tiif bilisummaa fi nagaa dhabee hacuuccaa diina keenyaa kan ta'e harka Seexanaa jalatti akka jiraatuus itti murtaa'etu ture. Baroota kana keessattis namoonni gaariis ta'e hamaa hojjetan hundumtuu carraa fayyinaa dhabanii sii'olitti ni guuramu ture. Raajonnii fi barsiisonni hedduun yoo kaa'nis lubbuu namaa fayyisuuf hin dandeenye ture. Sababni du'a lubbuu kanaa immoo dhalli namaa diina keenya kan ta'e seexanaan dogongoree waan Gannata keessaa arii'atameefidha. Waaqayyoof ajajamuusaaniif mallattoo kan taate frii balas/Aple/ akka hin nyaanne itti himameetu ture. Garuu sagalee gooyyomsaa seexanaa dhaga'anii ajaja Waaqayyoo cabsanii abaarsi isaanirra gahe. (Uma 3:17-19). Garuu Waaqayyo uumee kan nama gatu waan hin taaneef Addaam Abbaa keenyaaf abdii fayyinaa kenneef; waadaa galeef.
Haaluma kanaan Waaqayyo Ilmasaa dhala namaa wanjoo grbummaa seexanaa jalaa baasuuf jecha gara lafaatti ergeenii. Giiftii keenya Dubroo Maariyaamirraa dhalate. Yommuu dhalatus dinqiin Waaqummaa Isaa ibsan raawwatamaniiru. (Mat. 2:1-2). Akkuma raajiin adda addaa waa'ee dhalachuu Kiristoos dubbatamanitti Kiristoos ni dhalate. (Mat. 2:5-6). Hanga umuriinsaa waggaa 30 ga'uttis Haadhasaa Giftii keenya Dubroo Maariyaam waliin jiraate. Cubbuu malees akkuma namaatti suuta suuta guddate. Kiristoosis kaayyoo gara lafaatti dhufeefiif, dhala namaa fayyisuu, eegaluuf jecha harka Yohaannisiin cuubame. (Mat. 3:16). Yommuu cuubame sanattis raajiwwan raawwatamaniiru. Foddaan Samiis banamee iccitiin samii ifa bahe. Sana boodas erga guyyaa afurtamaa fi halkan afurtama soomee booda seexanaan qorame, injifatees of biraa arii'een. (Mat. 4:1-11)
Kiristoos waggoota sadiif ji'a jaha biyya Israa'el keessa naanna'ee erga barsiise kanaan booda kaayyoo gara lafaatti dhufeef keessaa tokko, kan ta’e dhala namaa barsiisee faakkeenya ta'ee ofitti deebsuuf, raawwate. Kaayyoon inni lammaffaa immoo du'a keenya nuuf du'ee du'a bara baraa irraa nu baraaruuf jecha guyyaa jimaataatti Fannoorratti fannifamee du'e. Akkuma dursee dubbatetti guyyaa sadaffaattis du'a moo'ee ka'e. (Mat. 28:6)
2. Du'a Kiristoos
Namoonni tokko tokko ''Nama dhiba duuti Kiristoos'' yommu jedhan ni dhaga'amu. Dhugumatti duuti Gooftaa keenya Iyyasuus Kirtoos namoota amantaa keessa jiraatan iif malee nama dhiba. Sababni isaas Waaqa ta'ee otoo jiruu harka namaatti du'uunsaa nama dhiba. Garuu, Kiristoos kan du'e aangoosaatiini dha. Kunis hojii fayyinaa dhala namaa keessaa isa tokko waan ta'eef. ''Yihuudaan cifrootaa, hangafoota lubuutaa fi gargaartoota/garboota/ Fariisotaa waliin guboo fi ibsaa akkasums eeboo fi gaachana qabate gara sanatti dhufe. Iyyasuusis waan isatti dhufaa jiru hundumaa beeke itti bahee: Eenyuun barbaaddu? jedheen. Isaanis Iyyasuus isa Naazreet ittiin jedhan. Iyyasuusis, Ana dha jedheen. ...egaa yommuu 'Ana dha' ittiin jedhe gara duubaatti deebi'anii lafarratti kukkufani." (Yoh. 18:3-7)
Jecha kitaaba Qulqulluu kanarraa kan hubannu Gooftaa fi Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos kan du'e humna dhabee, ykn Waaqummaan isaa hafeetu miti. Garuu dhala namaa du'arraa fayyisuuf du'a du'aan moo'uun barbaachisaa waan ta'eefi. Kiristoos kan du'e fedhasaatiin nama fayyisuus, diina karaarraa maqsuuf akka ta'e dursee dubbateera. ''Lubbuu koo... Ani fedhakootiin nan jiraachisaan malee eenyuyyuu narra hin fudhatu. Ishee jiraachisuuf aangoo nan qaba, ajaja kanammoo Abbaa koo irraan fudhe.'' Yoh. 10:17
Waan kun kan nu hubachiisu, Waaqayyo Ilmasaa gara namootaatti kan erge dhalli namaa akka du'a jalaa bahuufidha. Kiristoosis, eeyyama Abbaasaa kan Waaqayyo Abbaa raawachuuf aangoodhaan dhufee du'e. Akka du'us, du'a moo'ee akka ka'us dursee waan beekuuf barattoota isaatti himaa tureera. (Mat. 26:31, Luq.24:5)
Raajichi Isaayyaas dursee akkuma dubbatetti, Kiristoos dhala namaa fayyisuuf, garbummaa seexanaa jalaa baasuuf jecha foon namaa uffatee gidiraa hedduutiin akkamiin akka nama fayyisu dubbateetu ture. "Dhugumatti dhukkuba keenya fudhate, dhibee keenyas ni baate, nuti garu akka rukutame; Waaqayyoonis akka dheekkamame, akka nama rakkateettis isa lakkoofneen...Inni garuu; irra darbuu keenyaaf madaa'e, waa'ee balleessaa keenyaafis bullaa'e (reebamuusaa), dheekkamsi fayyina keenyaas Isarra ni ture, madaa Isaatiinis nun ni fayyine... Dhiphinaa fi murtiidhaan akka fudhatame, waa'ee ummataaf jedhee rukutamee lafa jiraattotaarraa akka dhabame (Du'e) dhaloota keessaa eenyutu hubate?". Kanarraa kan hubannu, dhugumatti Kiristoos waa'ee cubbee dhala namaa hundumaaf jecha Abbaa Isaa biraa gara lafaatti dhufee gidiraa hedduu akka fudhatu dubbatamaa akka ture ni hubanna. Yommuu guyyaansaa gahuttis akka raawwates Wangeelli haala hedduutiin nu ibsaniiru. Kanaafuu, Kiristoos kan du'e hojii fayyina dhala namaaf jecha malee, akkuma keenya nama dhadhabaa waan ta'eef miti. Waan kana ta'eefis duuti Kiristoof fayyina kootiifidha jedhanii amanuun amantii mootummaa Waaqayyoo nama dhaalchisu dha.
Read more: Du'aa Ka'uu